Wararka - Sida Loo Sameeyo Xilliga Xagaaga Oo Aan Baruur Ahayn Oo Aan Bixin!
Baaritaanno Been ah
Powder ciddiyaha Polish
Sida Loo Sameeyo Xilliga Xagaaga Oo Aan Baruur Ahayn Oo Aan Bixin!
Tan iyo bilowgii xagaaga, madax -xannuunka ugu weyn ee carwooyinka aniga oo kale ah oo aan weligood joojin quruxda daba -galka ayaa iska -qurxiya is -qurxinta xagaaga, gaar ahaan marka is -qurxinta ay kulushahay oo ay qurxintu dhalaalayso. Nus saac ka dib qurxinta halista ah, waxay isu beddeshaa weji rinji weyn leh. Runtii waa run. Oohin xoog leh!
Marka la eego xaqiiqda ah in dhibaatadani ay tahay mid caadi ah oo ku dhacda gabdhaha nooc kasta oo maqaarka ah, maanta waxaan si gaar ah u casuumnay macallimiinta farshaxanka qurxinta ee caanka ah si ay u xadaan sirta qurxinta muddada dheer ee xagaaga!
Marka hore, aan caddayno dhawr su’aalood oo aasaasi ah:
Maxaad iskaga siibaysaa qurxintaada?
Waxaa jira saddex sababood oo nagu kalifaya inaan iska siibno qurxinta: dhidid, sebum, iyo fuuqbax maqaarka.
Dhididku waa wax aynaan ka fogaan karin xagaaga. Gabdho badan oo walaalo ah ayaa sidoo kale sheegay in si ay qurxintoodu u sii dheeraato, waxay sidoo kale doortaan inay adeegsadaan waxyaabaha qurxinta, sida budo dabacsan, budo, iyo buufin qurxiyo, laakiin waa inay iska saaraan qurxinta ama iska bixiyaan. Dhibaatadu waxay ku jirtaa Halkee?
Waxaa jira kumanaan siyaabood oo lagu hagaajin karo qurxinta internetka, laakiin waa inaad ogaataa nooca maqaarka aad tahay, ka dibna dooro alaab dejinta qurxinta ku habboon iyo habka, haddii kale maqaarka qalalan wuxuu noqonayaa mid engegan oo engegan, iyo maqaarka saliidda leh si dhakhso ah ayuu iskaga saari doonaa qurxinta!
Tusaale ahaan, maqaar qallalan kuma habboona habka dejinta sandwich -ka, kaliya isticmaal budada dabacsan ee aagga t; Maqaarka saliidda leh, ha isticmaalin lakabka budada dejinta dabacsan si aad u dejisid qurxinta, laakiin wajiga qurxinta ayaa noqon doona maaskaro budo sabaynaysa!
Daryeelka maqaarka oo aad u fiican ka hor qurxinta
Xaaladda ugu fiican ee maqaarku waa in ay dhexdhexaad tahay oo aanay saliid lahayn, laakiin nooca maqaarka oo kale ayaa la odhan karaa way adag tahay in maalinba maalinta ka dambaysa ay soo baxdo. Waxaan asal ahaan leenahay maqaar engegan, maqaar dufan leh ama maqaar isku jira.
Qeyb weyn oo ka mid ah caqabadaha hor istaaga nuugista qoyaanka ee maqaarka xagaaga ayaa ah sababta oo ah stratum corneum waa mid aad u qaro weyn, sidaa darteed waxaan u isticmaali jiray inaan si tartiib ah maqaarka ugu masaxo suufka lagu qooyay toner ka dib nadiifinta, oo aan ka qaado qoorta iyo gadaasha dhegaha. Waxaa jira laba sababood. Midda hore waa in boodhka iyo wasakhda wejiga laga qaado, tan labaadna waa in maqaarka la dejiyo oo si fiican loo nuugo daryeelka maqaarka ee xiga.
Intaas ka dib, sii wad codsiga toner-ka labaad, oo saamaynta huurka laba-lakabka ayaa ka fiicnaan doonta. Waxaa muhiim ah in la ogaado in darajo kasta oo heer kulka oo kordha xagaaga ay kordhin doonto cadadka saliidda wejiga 20%. Kaliya marka biyo ku filan lagu daro dheelitirka biyaha iyo saliidda ma noqon karaan kuwo aad u dheellitiran.
Sababtoo ah waa inaad ku dabaqdaa muraayadda qorraxda iyo qurxinta salka ee dabagalka, waa inaad u doorataa qaabab nasasho iyo qoyaan leh nuxurka iyo waxyaabaha kareemka maalintii. Saamayn yar oo xakamaynta saliidda ayaa ah tan ugu fiican, haddii kale dufanku aad buu u saamayn doonaa samaynta filimka sunscreen -ka dambe ee wejiga. Qurxinta aasaasiga ahi ma fududa in maqaarka lagu dhego!
1. Dooro Alaabooyinka Qurxinta ee Saxda ah
Sidaan kor ku soo sheegnay, hababka dejinta ku habboon iyo alaabada noocyada maqaarka ee kala duwan way kala duwan yihiin, waxayna asal ahaan u kala baxaan laba nooc: maqaarka qalalan iyo maqaarka dufan leh. Badeecadaha dejinta ee suuqa waxaa ka mid ah budada dabacsan, keega budada ah, buufin dejinta, iwm ...
Budada dabacsan iyo keegga budada malabka ayaa kaliya u muuqda qaabab kala duwan. Mid waa budo si loogu isticmaalo reerka, kan kalena waxaa lagu riixaa keeg si loo soo saaro. Dhab ahaantii, maaddooyinka ugu muhiimsan ee budadu sidoo kale waa silica, budada talcum, titanium dioxide, zinc oxide, iwm Haa, waxay nuugaan saliid xad -dhaaf ah wejiga.
Magaca Ingiriisiga ee budada ah waa bud bud, taas oo ah wax soo saarka budada. Waxaad u isticmaali kartaa sida qurxinta aasaasiga ah mana u baahnid inaad isticmaasho alaabta budo si aad u dejiso qurxinta ka dib!
Waxaa jira siyaabo badan oo loo dejiyo buufinta qurxinta. Si kasta oo nuxurka nuxurka loogu daro xayeysiiska, jirka ugu weyn waa filim hore. Filimkii hore wuxuu wajigaaga ka samaynayaa filim difaac ah. Ma beddeli doonto qurxinta wejigaaga dhalaalka.
Faa'iidada buufinta goobtu waa inay daciifin karto dareenka budada ah ee wejiga qurxinta waxayna ka dhigi kartaa mid dabiici ah. Faa'iido darradu waxay tahay iyada oo aan loo eegin inta maaddooyinka xakamaynta saliidda lagu daro, saamaynta dhabta ahi uma fiicna sida saamaynta budada dabacsan ee xakamaynta saliidda keega iyo dejinta qurxinta!
Buufinta dejinta qurxinta ayaa iyaduna ah mid aad u badan, sida in lagu qasi karo aasaaska si aasaaska u noqdo mid waara oo dhalaalaya, buufinta dejinta qurxinta ayaa la isticmaali karaa ka dib habka dubista si loo daciifiyo dareenka budada ah. Laakiin maqaarka y1s1 ee saliidda leh kuma haboona in la sameeyo buufin keligiis ah, waxay noqon doontaa mid dufan leh oo ku habboon maqaarka qalalan.
2. Sida Loo Sameeyo Isqurxinta Noocyada Maqaarka Ee Kala Duwan
Guud ahaan, maqaarka qalalan ma soo saaro saliid badan dhabannada, waxaana u sahlan aagga T iyo dhabannada inay saliidda sii daayaan oo ay iska saaraan qurxinta. Macallin Jianxing wuxuu ku talinayaa in loo isticmaalo burush budada ah oo qalafsan oo loogu talagalay qurxinta qayb ahaan, ka dibna ha libiqsan oo fiiro u yeelo farsamada!
Dhex mari budada dabacsan oo si tartiib ah ugu cadaadi aagga T, sanka, garka, iyo geeska dusha sare ee dusha.
Sababtoo ah xaddiga saliidda ee ay soo saaraan maqaarka qalalan ayaa aad u yar xilligan, markaa ku mari kaliya burushka dabacsan ee burushka ah. Isbarbar dhigga wejiyada bidix iyo midig, aad bay u caddahay inaad arki karto in wejiga bidix uu yahay saamaynta qurxinta ee microdermabrasion, gabi ahaanba!
Maqaarka saliidda leh, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo budada dabacsan + buufin dejinta qurxinta si loo xakameeyo saliidda + u ilaali qurxinta bilaa guuldarada. Macallin Jianxing wuxuu kaloo leeyahay wax uu ka sheego sida loo isticmaalo buufinta qurxinta.
Hababka buufinta ee T iyo X ee caanka ah dhab ahaantii kuma habboona buufinta dejinta qurxinta. Si ka duwan buufinta Avène ee aan isticmaalno, oo ah haanta gaaska, xoogga buufintu waxay leedahay baaxad xoog leh. Jianxing wuxuu ku talinayaa in la isticmaalo goob saddex-dhibcood ah oo la isku qurxiyo.
3. Qurxinta saxda ah si loo kordhiyo waqtiga heeganka
Xitaa haddii aan mar horeba ku qaadannay qurxinta iyo qurxinta salka, ma jirto hab aan iskaga siibi karno qurxinta si heer -sare ah. Dib-u-buuxinta qurxinta ayaa noqotay ikhtiyaar lagama maarmaan ah in la kordhiyo waqtiga heegankayaga.
Waxaan kaloo ka soo aruurinay su’aalo badan walaalaha. Asal ahaan, in badan oo aad taabato qurxinta, ayaa aad u sii qurxoon tahay qurxinta. Qurxinta ka dib qurxinta waxay heli doontaa saliid waxayna si dhakhso ah iskaga bixin doontaa qurxinta. Haddaba waa maxay dhibku?
Tallaabada ugu horreysa ee qurxinta dibadda waa in aad nuugto saliidda xad -dhaafka ah ee wejiga ka hor intaadan is -qurxin. Imisa qof ayaan samayn tallaabadan, fadlan gacantaada kor u qaad, haddii kale waa wax dabiici ah in budadu si toos ah ugu dhegto wejiga dufanka leh, waxayna qaadan doontaa waqti dheer. Qurxinta waxay noqon doontaa gabal aad looga naxo!
Laakiin si aan daacad u ahaado, runtii waa dhib badan tahay in la keeno nudaha saliidda nuuga marka la baxayo. Macallinku wuxuu i baray khiyaano aan ku taabto qurxinta dibadda.
Marka hore soo saar gabal warqad shukumaan ah oo kala fur, ku laalaab dadab iyo garaac si aad u beddesho warqadda nuugaysa, ka dibna riix si aad saliidda u nuugto. Xagasha ka muuqata shaxda soo socota, riix dhabannada, sanka, iyo aagga T si aad u qaaddo saliid xad -dhaaf ah.
Riix si aad u hagaajiso foodda iyo garka, ku cadaadi faraha wajiga, oo dhinaca kale wejiga u rog oo isticmaal cadka dhinaca kale.
Meesha ugu dhibka badan marka aad iska saarto qurxinta markaad sanka iska bixinayso, marka lagu daro kala -goysyada baalasha, sanku sidoo kale waa qayb sanka ka mid ah oo uruursada iftiin saliid leh. Ha iloobin!
Ka dib markii la nuugay saliidda, waxay ahayd wax dabiici ah in la geliyo budada, Mudane Jianxing wuxuu kaloo siiyay farsamo taabasho gaar ah. Haddii aad si toos ah u isticmaasho budada budada si aad u taabato qurxinta, xaddiga budadu waxay noqon doontaa mid aad u badan, taas oo si sahal ah u keeni karta qurxinta inay dareento mid aad u culus, waana masiibo ka fog fogeynta bulshada!
U soo duub budada budada si duudduuban oo si tartiib ah ugu cadaadi qaybta ugu daran ee qurxinta, si ay qurxintu u noqoto mid sax ah oo aan budo badan lahayn!
Dhabannada, kaliya ku dhufo budada hadhay ka dib taabashada xagga hore, si taabashadu u noqon weydo mid culus, khafiif ah, oo dabiici ah!
Waqtiga dhejinta: Jul-14-2021
Kani waa astaanta Quruxda ee Kalocils oo ka socota Nanchang Weiti Technology Co., Ltd oo ku takhasustay soo saaridda indhashareer been ah, indho -indheyn, dhalaal dibinta, indho -indheyn, mascara iwm Alaabooyinka qurxinta quruxda badan ayaa nalaga dooran karaa. Calaamadda Quruxda ee Kalocils waxaa la aasaasay 2019, laakiin waxaan haysannaa ku dhawaad ​​10 sano wax soo saarka qurxinta qurxinta iyo waayo -aragnimada dhoofinta. Hadda, waxaan haysannaa ku dhawaad ​​3000 oo mitir oo laba jibbaaran iyo in ka badan 100 shaqaale deggan. Qiimahayaga dhoofinta sanadlaha ahi wuxuu ka badan yahay US $ 3000,000. Waxaan rajeyneynaa inaan abuuri karno xiriir ganacsi oo muddo dheer ah oo aan ka dhigi karno faa'idada labada dhinac mid dhab ah.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Reserved Rights. Alaabta Kulul - Khariidadda bogga
dibinta, jeedal mink, Jeexa indhaha, Kordhinta Indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, indho -dejiye,